March 18, 2017 सम्पादक अन्तरबार्ता, ग्यालरी
खड्ग फागो, मोरङमा प्रभावशाली युवा नेतामा चिनिनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ९ को सभापति रहनुभएका फागो उत्तरी मोरङमा युवाहरूमात्र होइन, गरिब, दिनदुखी, असहायका आसा र भरोसाका केन्द्र हुनुहुन्छ । उहाँको क्षमता र उहाँप्रति जनताको विश्वासले स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँलाई उर्लाबारीको भावी मेयरका रूपमा उर्लाबारीवासीले चर्चा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, स्थानीय तह निर्वाचन विषयमा केन्द्रित रहेर सभापति फागोसँग गरिएको कुराकानी :
तपाई नेपाली कांग्रेसमा लाग्नुका कारण ?
–सर्वप्रथम त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि नै कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसले जुन नीति, सिद्धान्त अबलम्बन गरेको छ, त्यसबाट नै म प्रभावित भइ कांग्रेस भएको हुँ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा जहानिया राणाशासनको अन्त्य भइ प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै जहानिया वृत्ता उन्मुलन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, राणा राजाहरूको आफ्न्तहरूको स्वामित्वमा दिइएको वनलाई राष्ट्रियकरणका साथै २०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले विभिन्न विकास निर्माणका काम तथा सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषिलाई समेटेर अगाडि बढ्न, २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसकै लौह पुरूष गणेशमान सिंहले जनताबाट खोसिएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुभयो । कांग्रेसले जुन प्रण प्रतिबद्धता र व्यवहारहरू देखिएको कारणले धेरै नै प्रभावित बनाएको छ ।
हालसम्म पार्टीको कुन कुन तहमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो ?
–नेपाली कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल तरूण दलको उर्लाबारी २ नं. वडा सह–सचिव, वडा संयोजकहुँदै क्षेत्रीय सदस्य, दुई पटक जिल्ला सदस्य र जिल्ला उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरे । यस्तै, नेपाली कांग्रेसको मोरङ क्षेत्र नं. २ को क्षेत्रीय सदस्य, सचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको छु ।
नेपाली कांग्रेसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
–पहिलो कुरा प्रजातान्त्रिक पद्दति अपनाउने पार्टी कांग्रेस हो । जबसम्म नीति, सिद्धान्त, आदर्शहरू बुझेर व्यवहारमा लागू गरेर नेता कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्छन् त कांग्रेसको भविष्य रही नै रहन्छ । त्यागी नेताहरू वीपी कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, सादगी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, निडर नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र महिला नेतृ सैलजा आचार्य र युवा नेता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू चिन्तन बोकेर राष्ट्रहित र जनताहितको कार्यहरू ग¥यो भने कांग्रेसलाई यो मुलुकबाट कसैले हटाउन सक्दैन । तर, यो आदर्श, नीति, चिन्तन र विचारहरूलाई बिर्सिएर सत्तामुखी, पद लोलुपतामा मात्रै नेता कार्यकर्ता रूझिन थाल्यौं भने यसै भन्न सकिने अवस्था कांग्रेसमा मात्रै होइन नेपालको कुनै पार्टीको भबिस्य पनि भन्न सकिन्न ।
वर्तमान मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा भनिदिनुहोस् न ।
–हाम्रो नेपाल हामी नेपाली विगतदेखि वर्तमान अवस्थामा पनि अन्तराष्ट्रिय दबाब र अनुसरणबाटै चलिएको अवस्था सर्वविदितै छ । र, संक्रमणकालिन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छौं । यो अवस्थालाई नेताज्यूहरू र सचेत जनताहरूले नजरअन्दाज गरेर हिड्न सकेनौं भने राजनीति त के देशको भविष्य नै कस्तो होला भन्ने बताउन सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा साधारण जनता र कार्यकर्ताहरूले समेत बुझिसकेका कुरा हुन्, यी । जबसम्म राजनीतिमा आफ्नोमात्र भविष्य खोजिन्छ, राष्ट्र र जनताको भविष्य खोजिदैन र सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने परिपाटीको विकास जनता तथा कार्यकर्तामा मानसिक रूपमा विकास हुन्न तबसम्म मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिने र झन्झन् जटिल अवस्थामा गुज्रिने अवस्थामा देखिन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रलाई देखावटी मात्रै नभएर व्यवहारमा नै जनताले महसुस गर्न सक्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र मेरो हो भन्ने भावना नेता र जनताहरूमा पुग्दैन तबसम्म देशको अवस्था यसै भन्न सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा एसियामा नेपाल गरिबीको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, र यही अवस्था रहिरहे समृद्धिको सम्भावना हुँदा हुँदै पनि पहिलो नम्बरमा रहने वेर छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
–मेरूदण्ड विनाको शरीर र निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र कल्पनासमेत गर्न सकिदैन । परिवर्तन संस्थागत गर्ने र जनभावना प्रतिबिम्भित गर्ने निर्वाचनबाटै हो । जनताको विवेकलाई सम्मान गर्न परिवर्तन संस्थागत गर्न, आधारभूत विकास गर्न सर्वदलीय भागवण्डाको आधारमा विकास गर्ने परिपाटीहरूलाई बदल्न बजेट सदुपयोग गर्न, जारी भएको संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचन हुनु जरूरी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना प्रबल रूपमा बढेर गएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति पनि तय गरिसकेको, स्थानीय तह पुनर्संरचनाअनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका निर्धारणदेखि लागूसमेत भइसकेको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहितासमेत लागू गरिसकेको अवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकै ठाउँबाट कांग्रेसका दर्जन नेता विभिन्न पदमा आकांक्षी देखिन्छन् नि ।
–लोकतन्त्रको सवल पक्ष नै यही हो । आफ्नो विचार राख्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । १९ वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको अवस्थामा विकास निर्माणमा पछाडि परेको अवस्था जगजायर नै छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा कति त्यस्ता विकास निर्माणको काम गर्छु भनेर इच्छा रहेकाहरूले पनि काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले निर्वाचनमा पदको इच्छा आकांक्षा राख्नु म स्वभाविक ठान्दछु । तर, भोली गएर टिकट पाउने प्रक्रियागत रूपमा जाने कुरा त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हुन् । त्यसमा को सवल छन्, को सक्षम छन् विकासको कार्यमा तदरूकताका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् र जनताको भावना अगाडि बढाउन सक्छन् त्यस्तोलाई नेपाली कांग्रेसमात्र होइन अन्य पार्टीको साथीले पनि उम्मेद्वारी छनौट गर्दा राम्रो होला ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दले उम्मेद्वार छनौटमा समस्या त ल्याउंदैन ?
–नेपाली कांग्रेसमा सबैले बुझिसकेको अवस्था छ । र, पार्टीका सक्षम नेतृत्वलाई टिकट दिँदा जिताउन लाग्नुपर्छ भन्ने भावना स्थापित भइसकेको देखिन्छ । र, आन्तरिक कलह मैले त्यस्तो केही देखेको छैन । साधारणरूपमा कहिलेकहिले विचारको विमतिहरू हुन्छन्, होइन भन्न सकिन्न ।
उर्लाबारीको मेयरमा तपाई पनि उठ्ने चर्चा छ नि ?
मैले अघि नै भनिसके । लोकतन्त्रमा आफ्नो विचारहरू राख्न पाइन्छ । र, मेरो सवालमा पनि कार्यकर्ताहरू तथा आम नागरिकले चर्चा परिचर्चा गरिराख्नुभएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । यसैमा मैले पहिला नै भनेको छु, नेपाली कांग्रेसले काम गर्ने, क्षमतावान, इच्छाशक्ति भएका योग्य तथा जनताको भावना जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि राय हो । त्यो भित्र कार्यकर्ता तथा आम नागरिकले मबाट त्यो अपेक्षा राख्नुभएको छ भने म त्यो पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढी उहाँहरूको भावना र विचारहरूलाई कदर गरी अगाडि बढ्ने छु ।
तपाई राजनीतिभन्दा बाहिर कुनै संघसंस्थामा नबसेको मान्छे, टिकट पाइहाल्नुभयो भने चुनाव जित्नुहोला ?
हो, म कुनै संघसंस्थामा आवद्ध छैन । राजनीति गर्दै जाँदा सामाजिक संघसंस्थामा अवसर पनि नआएका होइनन् । त्यसमा मलाई लाभ त निश्चय नै हुन्थ्यो होला । तर, त्योभन्दा पनि म राजनीतिलाई नै अगाडि बढाउने उद्देश्यले आएको हुँ । राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्नु हो । उदाहरणको रूपमा लियौं, दमक, पथरीशनिश्चरे, बेलबारीको संस्थामा छन्, र ऊ उर्लाबारी केही बनाउँछु भन्दै जाँदा उसले ती विभिन्न ठाउँमा कतिको व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुपर्दछ । स्वभाविक हो, संघसंस्थामा सहयोग गर्ने हो तर, बसेपछि विशुद्ध जुन उद्देश्य लिएर आएको छु त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।
उर्लाबारीमा राजघाट र मधुमल्लाको केही वडा मिसिँदा नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सजिलो देख्नुभएको छ ?
–पहिलो कुरा आम नगरबासीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि । हामी कोही पनि भ्रममा नपरौं । हामी कोही कसैसँग मिसिएको होइन । हामीबीचमा दुईटा आली थियो । त्यो आली भत्काएर हामी एउटै गरामा सीमित भएको हो । यो सोच नै गलत हो मिसियो भन्ने । भारतको विहार यूपी मिसिएको हो र ? अर्काेकुरा यो प्रश्नले भन्न खोजेको के हो ? त्यहाँ नेर कांग्रेस छैन भन्न खोजेको हो ? ल त्यहाँ नेर सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न पार्टीमा आवद्ध हुनुहुन्छ होला । तर, साविक राजघाट र मधुमल्लाका जनताहरू कसैको कुत कमाउने र कसैको ठेकेदारीको मजदुरी गर्ने मात्र होइनन् । अहिलेको समय भनेको २१ औं शताब्दीमा कसैले मेरो पकड छ भन्यो भने त्यो भ्रमपूर्ण हो । र, त्यहाँ सबल, सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिक विकास भइसकेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेले मात्र यहाँ, उहाँ मेरो पार्टीको पकड भन्छन् ।
कसैले सोचेको होलान् । त्यहाँका जनताहरू हामीले नै भनेको मान्छन् । मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता राणाकाल र पञ्चायती कालमा त्यो ठाउँमा मेरो अञ्चलाधीश र वडा हाकिम छ उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यहाँको जनताले त्यही मान्छ भन्ने दम्भ मात्रै हुन् । ती ठाउँमा गएर तपाईहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ, अब कस्लाई भोट दिनुहुन्छ भन्दा केही सीमितले भन्लान् म यो पार्टीलाई दिन्छु भन्लान् तर, अधिकांश सचेत वर्गले यो हाम्रो नगरमा कस्ले जनताको दुःखसुख केकस्ता छन् र भइरहेको दुःख, कष्ट र समस्यालाई हटाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने उम्मेद्वारलाई हामी भोट दिन्छौं भन्ने भावनाको विकास भइसकेको छ । र, तपाईहरु कसैलाई भ्रम पर्छ भने गएर त्यहाँको नागरिकहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । हामी कोही पनि यो दम्भदेखि हटेर जनताको मनभावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि रहेको छ ।
निर्वाचन जित्ने आधारहरू के कस्ता रहेका छन् ?
–मैले भन्दा पनि आम कार्यकर्ता तथा नगरवासीहरूले मेरो आधार देख्ने हो । २ सय ४६ वटा नगरपालिकामा यो उर्लाबारीलाई पहिलो र उर्लाबारीजस्तो नगरपालिका हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण कसैले दिन सक्ने बनाउँछु भन्ने मेरो हिम्मत छ ।
तपाईले जित्नुभयो भने तपाईको चुनावी एजेण्डाहरू के–के हुन् ?
–म मेयरमा उम्मेदवार भइहालेको खण्डमा भ्रमपूर्ण र जित्नका लागिमात्र मेरो आश्वासन हुन्न । किनकी भोली जनताले थाहा पाउने कुरा हुन् र कोही पनि नेताहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, भ्रमको खेती गरेर चुनाव जित्नु भनेको जनतालाई सिधासिधी ढाट्नु हो । त्यसै कारणले मेरो व्यवहारमा देखाउने कामहरूमा शहर विकास मापदण्ड तयार पार्ने, जस्तै, बस, ट्यासी, रिक्सा, बजार व्यवस्थापन, प्रत्येक बस्तीमा विद्युत, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था, भूउपयोग नीतिजस्तै, कृषि क्षेत्र, पर्यटन, फोहोरमैला व्यवस्था, व्यवस्थित निर्माण संरचना, प्राविधिक शिक्षा गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नगर क्षेत्रमा फ्रि इन्टरनेट सर्भिस, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई संरक्षण गर्दै त्यसमा वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गरेर सम्भावयता अध्ययन गरी अगाडि बढ्ने, विभिन्न जातजाति भाषा, कला, संस्कृति, संस्कारको विकास र संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदको विकासमा विभिन्न योजना, व्यवसायीहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, नगर क्षेत्रमा उद्योगको सम्भावयता अध्ययन गरी लगानी भित्र्याउने र रोजगारी प्रदान गर्ने, बक्राहा तथा मावा खोलामा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडा वडामा अन्तरक्रिया गरी विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, एउटा वडा एउटा पहिचान नीति बनाउनेलगायत रहेका छन् ।
तपाईको उम्मेद्वारी आएको खण्डको तपाईले प्रतिस्पर्धी कस्लाई देख्नुभएको छ ?
–ल तपाईले भन्नुहोस्, मेरो प्रतिस्पर्धी को हुन्छ ?
एमाले ? यो विलकुल गलत हो । मेरो प्रतिस्पर्धी न पार्टी हुन्छन् न त कुनै पार्टीका उम्मेद्वार नै । मेरो प्रतिस्पर्धी भनेको ती अभाव, ती अशिक्षा, ती निमुखा, ती मजदुर, ती विकासबाट पछाडि धकेलिएका, समस्यामा परेका नागरिक हुन् । म अन्य पार्टीका नेतालाई प्रतिस्पर्धी मान्दिन । मान्नुपनि हुँदैन र एउटा राजनीतिको विकास हुँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । र, कसैले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी यही कुरालाई राखेर लानुपर्छ भन्ने पनि मेरो धारणा छ ।
–यो स्थानीय निर्वाचन भनेको आम नगरवासीले आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैं चुन्ने हो । त्यसैले उर्लाबारी नगरपालिकालाई गतिशिल बनाउने र कुनै पनि लोभ लालचमा आफ्नो अधिकार नसाटी आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने उर्लाबारीको समुन्नत विकासमा अगाडि बढौं भन्न चाहन्छु ।